Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ရေးသားချက်
at 3/08/2015 11:42:00 AM
Dapayin guilty party ဒီပဲယင်းအရေးအခင်း လုပ်ကြံခဲ့သူများ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ရေးသားချက်အရ ၂ဝဝ၃ မေလ ၃ဝ ရက် ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှု အဓိကတရားခံသုံးယောက်
(၁) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ
(၂) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း
(၃) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်
(၁) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (ငြိမ်း)
ဇနီး = ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်
• နဝတ ဥက္ကဋ္ဌ = ၁၉၉၂ မှ ၂ဝ၁၁ အထိ။
• Officer Training School ကျောင်းဆင်း။ ၁၁-၇-၁၉၅၃ မှစပြီးအမှုထမ်း။ ၄-၁၁-၁၉၈၆ ဒုဗိုလ်ချုပ်။ ၄-၁၁-၁၉၈ ဗိုလ်ချုပ်။ ၂၇-၇-၁၉၈၈ ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီး။ ၁၈-၉-၁၉၈၈ စစ်အာဏာသိမ်းဒုခေါင်းဆောင်။ ၂၃-၄-၁၉၉၂ စောမောင်ကိုဖယ်ရှားပြီး ဥက္ကဋ္ဌလုပ်။
• ဇနီး = ပအို့သူဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်။ သမီး ၅ ယောက်ရှိ။ အေးအေးသစ်ရွှေ၊ ထားဝယ်ရွှေ၊ ခင်ပြုံးရွှေ၊ ကြည်ကြည်ရွှေ၊ သန္တာရွှေ၊ သာ3းယောက်ရှိ။ ကြိုင်စန်းရွှေ၊ သန့်ဇော်ရွှေ၊ ထွန်းနိုင်ရွှေ။
• ကျန်းမာရေး= ဆီးချိုရောဂါ၊ လူကြီးရောဂါ။
• ၂၇-၉-၂ဝဝ၇ သံဃအရေးအခင်းကာလ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်နဲ့အဖွဲ့ လာအိုနိုင်ငံကို ရှောင်ထွက်ခဲ့။ လက်ရှိ ဟယ်လီကော့်ပတာ ၂ စီးဝယ်ထား။ ရုရှားပိုင်းလော့၂ ယောက် နေပြည်တော်မှာ အဆင်သင့်လုပ်ထား။
(၂) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့် (BC.10310 OTS.31)
လက်ရှိ = မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်
ဇနီး = ဒေါက်တာဒေါ်ခင်လေးမြင့်
• Former Chief of Bureau of Special Operation (BSO) 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magawe, Mandalay)
• 1988: Served in the 59th infantry battalion in the Southern Military Region.
• 1992: Tactical Operations Commander No.1 and then the Deputy Commander of LID-88 in Magwe Division. He commanded LID 101.
• 1994: Promoted to Brigadier General and became the Central Military Region Commander in Mandalay
• November 1997: Promoted to the rank of Major General and appointed to the SPDC.
• 2006: Promoted to Lieutenant General and appointed head of Military Affairs Security.
(၃) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း (သေဆုံး)
ဇနီး = ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်
ာခင်ဝန်ကြီးချုပ် ၁၉-၁ဝ-၂ဝဝ၄ မှ ၁၂-၁ဝ-၂ဝဝ၇ အထိ
• Was seenahard-line operator with close links to Than Shwe. He succeeded Khin Nyunt as prime minister in 2004.
• Soe Win's earlier roles were North-West Commander and Chairman of Sagaing Division Peace and Development Council.
• He commanded an infantry division which helped crush the democracy party in 1988 following Daw Aung San Suu Kyi's overwhelming victory in national elections. General Soe Win was nicknamed the butcher of Dipeyin for his role in the 2003 attack on Daw Aung San Suu Kyi and her followers near the northern town of Dipeyin.
• The general first achieved notoriety as one of the officers who brutally suppresseda1988 pro-democracy uprising, commanding troops around Rangoon University —acenter for demonstrations — and giving orders to fire onacrowd of protesters in front of Rangoon General Hospital. Rangoon, now Yangon, is Myanmar’s largest city.
• He joined the Defence Service Academy in 1965, and quickly worked his way up through the military ranks.
• He joined the junta in 1997, and was appointed as Secretary-2 of the council in February 2003, and Secretary-1 in August of the same year, replacing Khin Nyunt, who became prime minister.
• He died on 12 October 2007 in Rangoon, amid reports that he was suffering from leukaemia. He received treatment in the same hospital in Singapore that Than Shwe visited in January 2007.
• Lt Gen Thein Sein (current president), who ranks fifth in the military, replaced Soe Win as acting prime minister in May.
၁၉၆၂ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦးကို ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ခွဲတဲ့တရားခံကို ဗခကနေဝင်းနဲ့ ဗမခအောင်ကြီးတို့က တယောက်အပေါ်တယောက် လွှဲချခဲ့ကြတယ်။
ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုမှာ မုံရွာ-ချောင်းဦးနားကနေ အမိန့်ပေးခဲ့တဲ့ စွမ်းအားရှင် (ကနေ့လက်ပတ်နီ) အဖွဲ့ကို မွေးထုတ်ခဲ့သူ ဦးအောင်သောင်း နာမည် ထည့်ထားတာမတွေ့ရပါ။